स्तानपान गराइरहेकी आमामा कोरोना पुष्टि हुन्छ, बच्चामा किन देखिदैन् ? यसो भन्छन् विशेषज्ञ… – Ishan Hospital
अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च छ । यो अन्तर्वार्ता तयार पार्दासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण १ हजार १ सय ८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, भने संक्रमितको संख्या २ लाख नजिक पुगेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बच्चाहरुमा पनि देखिएको छ । यही संक्रमणका कारण केही बच्चाको मृत्यु भएको छ । बच्चाहरुमा कोरोना संक्रमण न्युन हुन्छ,संक्रमित भएनी केही हुन्न भन्ने कत्तिपय मानिसको गलत बुझाईका कारण बच्चामा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको पाइन्छ । यो संक्रमणबाट बच्चालाई के कसरी जोगाउने ? संक्रमित बच्चामा पछि केही असर गर्छ की गर्दैन् ? अंकुरण खबरका लागि ईशान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक वरिष्ठ बाल सल्यचिकित्सक प्रा.डा.रामनन्दन प्रसाद चौधरी(आरपी) संग गरिएको कुराकानीमा आधारित अंश… बच्चाहरुलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट कसरी जोगाउने ? विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको भाइरस भएकाले पनि सबै उमेर समुहका मानिसले जोगिन सावधानी अप्नाउनै पर्छ । त्यस माथि बच्चाको उमेर भनेको संवेदनशील उमेर हो । रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । यसो हुँदा कोरोना संक्रमण हुने संभावना पनि बढी रहन्छ । उनीहरुलाइ रोग केहो, कसरी लाग्छ, कसरी बच्ने थाँहा हुदैन् । यसमा अभिभावकै हात हुन्छ कसरी जोगाने भनेर । अहिले त झन चिसो मौसम सुरु भएको छ । यो मौसममा रुघा खोकी लगाएत सामान्य फ्ल्यूको संक्रमण पनि बढी देखिन्छ । यो भाइरसलाई खेलाची गर्दा ज्याननै जान सक्छ । यस अर्थ निम्न सावधानी अप्नाए बच्चालाई संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ : संभव भएसम्म बच्चालाई बाहिरी मानिसको सम्पर्कमा जान नदिने । बाहिरबाट आएका मानिसहरुबाट पनि टाडै राख्ने । बाहिरका खानेकुरा खान नदिने । हरिया सागपात, ड्राईफ्रुट्स, दुग्धजन्य पदार्थ, ताजा फलफूल खान दिने । समयसमयमा झोलिलो पदार्थ तातो पानी पिउन दिने । बाहिर पठाउनै परेमा मास्क, पन्जा लगाएत पठाउने । दुरी कायम गर्न लगाउने । खोक्दा र हाच्छ्युँ गर्दा रुमाल अथवा टिस्यु पेपरले नाकमुख छोप्न सिकाउने । सानो बच्चा भए मास्क लगाएर सुरक्षित स्तानपान गराउने । सुरक्षित स्थानमा बिहान घाममा राख्ने, खेल्न लगाउने । कोरोनाका कारण बच्चाहरु घरभित्रै सिमित रहदा टिभी,मोबाइल लगाएतका विद्य्तीय सामग्रीमा बढी समय बिताउने गरेको पाइन्छ, यस्तो बानीले के कस्तो असर गर्ला ? यो अहिले घरघरको समस्या बनेको छ । बालबालिकाहरुको धेरै समय टिभी,मोबाइल ल्यापटपसंग बित्छ । अहिले अनलाइनबाट पठनपाठन हुने भएकाले पनि यस्ता साधानको प्रयोग अपरिहार्य बनेको छ । यद्यपी अधिकाशं समय यस्ता साधनमा बच्चा बुलिदा यसले बच्चाको चौतर्फी विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बच्चाहरु बिस्तारै असामाजिक बन्दै जान्छन् । यस अर्थ पनि आवश्यक्ता अनुसार सिमित समय यस्ता साधानको प्रयोग गर्न दिने तर्फ अभिभावक सचेत रहनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा स्तानपान गराइरहेकी आमा कोरोना संक्रमण देखिदा पनि शिशुमा नदेखिने गरेको छ, के कारणले यस्तो हुन्छ ? संक्रमितको सिंगान, थुक, ¥याल आदिमा भएका किटाणु नाक,मुख हुदै शारीर भित्र प्रवेश गर्दा शिशुमा पनि संक्रमण हुने हो । तर संक्रमित आमा बच्चाबाट टाडै रहने, स्तानपान गराउँदा मास्कको प्रयोग गर्ने, अघिपछि पनि माक्स लगाएर बस्ने, सरसफाई, खानपानमा ध्यान दिए शिशुमा नसर्न पनि सक्छ । कोरोनाबाट बचाउन भन्दै बच्चालाई पटक पटक स्यानिटाइजर लगाउन सिकाइन्छ, के यस्ले बच्चाको छालामा असर गर्छ ? अहिले बजारमा पाइने सबै स्यानिटाइजर गुणस्तरीय छन भन्ने अवस्था छैन् । कम गुणस्तरका या गुणस्तरहीन स्यानिटाइजरको पटक पटकको प्रयोगले बच्चाको मात्र नभएर ठुलो मानिसको छालामा पनि असर गर्न सक्छ । बच्चाको छाला कलिलो, मुलायम हुन्छ । गुणस्तरहीन वा कडा स्यानिटाइजर पटकपटक प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्छ । त्यही भएर स्यानिटाइजर भन्दा साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुन सिकाउने गर्नु राम्रो हुन्छ । तपाईहरु सल्य चिकित्सकले संक्रमित व्यक्तिको सल्यक्रिया गर्दा सर्ने संभावना कत्तिको रहन्छ ? यो छिट्टै र सजिलै सर्ने भएकाले नै विश्वभरी नै महामारीको रुप लिएको हो । हामी सल्य चिकित्सकलाई सर्ने संभावना अझ बढी रहन्छ । कुनै अकस्मिक सल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यतीखेर पीसीआर परीक्षणको नतिजा कुर्दा बिरामीको ज्याननै जान पनि सक्छ । हामीले त्यो रिपोर्टको प्रतिक्षा नगरि सल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कत्ति संक्रमित थाहा भएकाको पनि गर्नुपर्छ । हामीले आवश्यक पर्ने सुरक्षाका सबै कुरा अवलम्वन गर्छैं । एन नाइटफाइभ माक्स, फेसिल, पिपिई लगाएर काम गरिहेका छौं । त्यही भएर संक्रमित हुुनबाट जोगिएका छौ । हाम्रै ईशान अस्पतालमा पनि तीन वटा कोरोनाका केसलाई आकस्मिक शल्यक्रिया गरेका छौं । अस्पताल भित्र सबै सुरक्षित तरिका अप्नाएका छौं । एक पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका बालबालिकामा पछिसम्म यसको असर रहिरहन्छ भन्ने त्रास छ नी, के यो सत्य हो ? कोरोना संक्रमण हुनबाट नै बच्नुपर्छ सबै भन्दा पहिला त । यदि भैहाले पनि राम्रो हेरबिचार गर्दा अधिकांशलाई यो निको हुन्छ । एक पटकको संक्रमणले दीर्घकालसम्म अन्य अंगमा पनि असर गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन् । तर एक पटक निको भए पछि पनि आवश्यक सावधानी नप्नाए पुनः संक्रमण हुने संभावना चै रहन्छ ।